Cristiano Ronaldo oo ilmada ceshan waayay isagoo Wareysi siinayey ITV kaddib markii loo daaray Muuqaalka… – Gool FM
(Yurub) 18 Sebt 2019. Xidigga kooxda Juventus iyo xulka qaranka Portugal, Cristiano Ronaldo ayaa waxaa wareysi dhinacyo badan taabanaya uu siiyay barnaamijka (Good Morning Britain) ee uu daadihiyo Piers Morgan kaasoo ka baxa ITV.
CR7 ayaa wareysigaan waxaa lagu weydiiyey waxyaabo badan oo noloshiisa gaarka ah quseeya.
Cristiano Ronaldo ayaa ilinta ceshan waayey kaddib markii loo daaray muuqaalka Aabihiis, waxaana kabtanka xulka qaranka Portugal uu sheegay in Aabihiis oo Khamri cabe ahaa uusan fursad u helin inuu arko isagoo xiddig weyn noqday.
Waxa uu hadalkiisa intaa ku daray Ronaldo inuusan si fiican u garaneynin Aabihiis oo askari hore ahaa laguna magacaabi jiray Denis ka hor inta uusan geeriyoon sanadkii 2005 isagoo 52 sano jir ahaa.
“Xaqiiqdii Aabaheeyuma aqaano si 100% ah, waxa uu ahaa mar walba qof cabsan, waligeey wadahadal caadi ah lama yeelan, aad ayay iigu adkeyd” ayuu yiri Ronaldo.
Markaas kaddib Ronaldo ayaa loo daaray muuqaal laga duubay Aabihiis oo Wareysi ka bixinaya wiilkiisa ka hor tartankii Euro 2004 ee lagu qabtay dalka Portugal, Cristiano Ronaldo ayaana ooyin jabsaday oo ilinta isku celin waayay markii uu maqlay Aabihiis oo ku faanaya isaga.
Waxaa la weydiiyey Ronaldo waxa ay ka dhigay mid murugoonaya ama qiiroonaya marka uu soo xusuusto Aabihiis kaasoo ay saameyn ku yeelatay dagaalladii uu ka galay qaaradda Afrika gaar ahaan Waddamada Mozambique iyo Angola.
“Inaan ahay xiddiga koowaad, mana uusan helin fursad uu ku arko, ma uusan helin fursad uu ku arko abaal-marinnada aan helayo iyo waxa aan noqday, qoyskeyga waa ay arkeen, hooyadeed, walaalaheey, xitaa wiilkeyga iigu wayn, laakiin Aabaheey waxba ma uusan arkin, isagoo dhallin yar ayuu geeriyooday.” ayuu yiri xiddiga kooxda Juventus ee CR7.